Sidee loo diyaariyaa Lemon Champ? | Ragga Stylish
Asalkiisu gabi ahaanba ma cadda. Qeyb ka mid ah gastronomy-ka Argentine waxay u sifeyneysaa hal-abuurkeeda dalkan Ameerika, in kasta oo aysan jirin hab lagu caddeeyo illaa iyo hadda.
Runtu waa tan Lemon Champ waa cabitaannada ugu caansan. Oo waxa ayna dadka qaar garanayn waa taas diyaarinteedu waa layaab fudud.
1 Macaan ama Cab?
2 Maaddada liinta
3.1 Isku darka: qiimaha kaladuwan
3.2 Qabooji muraayadaha kahor intaadan cabin cabitaanka
4 LemonChamp cad?
4.1 Diyaarinta jalaatada guriga
4.2 Aynu yeelno
Macaan ama Cab?
Tani sidoo kale waa "muran" qodob. Qaar badan waa cabitaan waana in loola dhaqmaa sida oo kale. Cabitaan ku habboon noocyada roodhida qaarkood, doorbid ahaan xilliyada xagaaga.
Qaar kale waxay u kala saaraan macmacaan. A "dhiirran" iyo "jalaato xiiso leh."”, Waxaa loo sameeyay si looga saaro midab caajis gaar ah midhaha sida ay u badantahay sida ay u badan tahay: liinta. Macmacaan, intaas kadib, qiimaheeda lagu daray waa inuu leeyahay qadar yar oo khamri ah.
Si sax ah Liin dhanaanta ku jirta aalkolada waa mid ka mid ah astaamaha lagu garto. Waa cabitaan (ama macmacaan, waxay kuxirantahay munaasabada), kaas oo isku daraya kan ugu fiican labada adduun: xafladda dabaaldegga (sida rootiga sannadka cusub). Sidoo kale waa macaan qabow sida ku qasbidda maadaama ay macaan tahay.
Waxaa laga sameeyaa maaddooyinka badanaa laga helo bakhaar kasta iyo qaboojiyaha. Si kastaba xaalku ha ahaadee, waa badeecooyin si fudud loo awoodi karo inta badan dukaamada raashinka ama dukaamada waaweyn. Magac ahaan:
1 Dhalo oo ah Champagne ama cava. La doorbidayo mid aad u qabow.
G Kg oo liin jalaato ah.
1 liin weyn oo muuqaal ah
Intaa waxaa sii dheer, in la siiyo noocyo yar oo ballaaran oo midabbo iyo dhadhanba leh, jeeriga ama qaar ka mid ah strawberries qurxin ayaa lagu dari karaa
Lemon Champ waa cabitaan loogu tala galay muraayadaha ama muraayadaha. Waxa ugu horreeya waa in la diyaariyo walxahan si loo helo cabitaanka. Tan waxaad u baahan tahay oo keliya inaad qoyso ka dibna u sii mariso sonkorta.
Diyaarinta cabitaanku waa sida soo socota: jalaatada iyo champagne waxaa lagu shubaa weel si xoog leh ayaa loo walaaqaa. Hadafku waa in isku darku yeesho qaab jilicsan oo kareem leh. Waa loo adeegaa oo lagu qurxiyaa liinta, oo ay tahay in la jarjaro. Cherries iyo strawberries kale ayaa sidoo kale lagu dari karaa.
Isku darka: qiimaha kaladuwan
Marka cabitaanku waa mid shiidan oo jilicsan, waxaa jira faahfaahin muhiim ah: ku garaac isku dar. Dhadhanka ficil ahaan isku mid ayuu noqon doonaa, laakiin qaabku wuu ka duwanaan doonaa. Dareenka gudaha afku aad ayuu uga sii fiicnaan doonaa. Iyo xitaa heer muuqaal ah waad arki kartaa faraqa.
Qabooji muraayadaha kahor intaadan cabin cabitaanka
Tani waa faahfaahin kale oo isbeddel samayn karta inta udhaxeysa rooti wanaagsan iyo mid dadka ay kaqeyb qaataan ay waligood xusi doonaan. Muraayadaha qaboojiyaha ama guntinnada waxba kuma kacaan waana u qalantaa isku day.
Waa inay kaliya ku qoyso biyo yar oo cabitaan ah kuna rid qaboojiyaha 20 daqiiqo. Saameynta kaliya ma noqon doonto mid u muuqata taabashada. Daqiiqadaha ugu horreeya, waxay ku siin doontaa sawir qabow oo waliba u adeegi doona qurxin.
Waxaa jira xitaa hab fudud oo loo qaadan karo cuntadan. Ku habboon marka loo sameeyo si khaas ah shakhsi ahaaneed ama koox yar oo dad ah, illaa saddex xubnood.
Marka muraayadaha ama muraayadaha ay diyaar yihiin, Laba qaado oo jalaato ah ayaa la dhigaa halkii weel. Kadib shaambada ayaa lagu shubay dusha sare, illaa laga gaarayo awoodda ugu badan. Waxaa loo qaadan karaa sidan ama waxa kujira si fudud ayaa loo garaaci karaa iyadoo la raadinayo dhadhanka la isku daro.
Diyaarinta jalaatada guriga
Iibsiga jalaatada diyaarka ah ee u diyaarka ah u adeegida waa fikrad waqti badbaadin ah. Sida ugu fudud iibso, daaha ka qaad oo u adeeg. In kasta oo wax ku ool la yahay, haddana waxaa jira kuwa jecel inay gurigan ku diyaariyaan cunnadan. Tan waxaa sii dheer wuxuu siinayaa taabasho shakhsi ahaaneed liinta Champ.
Si aad ugu dhiirrigeliso cuntadan, waxa ugu horreeya ee ay tahay in la miisaamo waa maaddooyinka loo baahan yahay. Waxaa muhiim ah marka lagu daro bixinta dhadhan fiican, waa wax kareem leh:
¼ litir oo liin dhanaan ah.
½ litir oo caano ah
G Kg sonkor ah
¼ litir oo biyo ah
2 qaado oo sonkor rogaal celin ah
Xulka liin dhanaanta
Ikhtiyaari ah: taabasho milix ah si aad u dhadhamiso
Tallaabada ugu horreysa waa milo sonkorta ku jirta biyaha kuna shub kuleyl dhexdhexaad ah, si joogto ah u walaaq. Marka ay timaado barta wax lagu kariyo, waa inaad kuleylka hoos u dhigtaa ugu yaraan, dabool oo sug 10 daqiiqo.
Waqtigan ka dib, ku dar sharaabka iyo liin dhanaanta. Ka tag dabka illaa inta isku diyaarinta ay kareyso. Kadibna sonkorta rogan ayaa lagu darayaa oo laga saarayaa kuleylka. U wareeji weel caag ah iyo Waxaa loo qaadaa qaboojiyaha si loo yareeyo heerkulka.
Mar dambe, caano ayaa lagu darayaa isku dar ah oo la gelinayaa qaboojiye. Isla mar ahaantaana, ukunta cad (oo leh milix cusbo ah) ayaa la keenayaa barta barafka. Diyaargarowgan waa inuu ku faafo iyadoo la kaashanayo trowel diyaarinta weyn. Ka dib markaad ka tagto qaboojiyaha 12 saacadood, mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee Lemon Champ ayaa diyaar u noqon doona ficil.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Nafaqeyn » Sidee loo diyaariyaa Lemon Champ?
Toddobo siyaabood oo laysku daro dusha